जङ्गलमा लागेको अागाे बस्तिमा सल्किदा तेह्रथुम फेदाप १ सिम्लेमा १५ बढि घर जलेर नष्ट । – Gorkhali Dainik
जङ्गलमा लागेको अागाे बस्तिमा सल्किदा तेह्रथुम फेदाप १ सिम्लेमा १५ बढि घर जलेर नष्ट ।
March 26, 2021 101
“काठमाडौं, शुक्रबार दिउँसो काठमाडौं विश्वकै पहिलो प्रदुषित शहरमा परेको छ । विश्वको प्रदूषण मापन गर्ने आइक्यू एयर डट कमले शुक्रबार दिउँसो केहीबेर काठमाडौंलाई विश्वकै पहिलो वायु प्रदूषित शहरमा राखेको हो । प्रदूषित शहको लिष्टको दोस्रोमा चीनको राजधानी बेइजिङ रहेको छ । तेस्राे नम्बरमा भारतकाे मुम्बइ, चाैँथाे नम्बरमा बंगलादेशकाे ढाका र पाँचाैँ नम्बरमा चीनकाे वुहान रहेकाे छ ।”
“काठमाडौंमा प्रदुषण बढ्दा हवाइ उडानमा समेत असर परेको छ । त्रिभूवन विमानस्थल स्रोतका अनुसार शुक्रबार मध्यान्नबाट उडान तथा अवतरण दुवै बन्द गरिएको छ । भारतको विभिन्न स्थानबाट उडेर आएको धुलोका साथै काठमाडौं उपत्यकामा सुख्खापन छाएका कारण वायु प्रदुषण भएको बिज्ञहरुको भनाइ छ ।”
“वायु प्रदुषका कारण भिजिविलिटी कम भएकोले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलबाट हुने उडानहरु प्रभावित भएको विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ ।”
“शुक्रबार काठमाडौंबाट उड्ने दर्जनौँ उडानहरु प्रभावित भएकाे त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल स्राेतले जनाएकाे छ । जसमा सबैभन्दा धेरै भरतपुरको उडानहरु प्रभावित भएको विमास्थल स्रोतले जनाएको छ ।”
“नेपालकै तराई क्षेत्रमा भइरहेको आगलागी र सुख्खा बढेको कारण पनि काठमाडौको आकाशमा प्रदुषण छाएको विज्ञहरुको भनाइ छ । वायु प्रदुषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पर्ने भएकाले सचेत रहन विज्ञहरुले आग्रह गरेका छन् ।”
“विज्ञहरूले बाहिर ननिस्कन तथा निस्कनै परे मास्क अनिवार्य लगाउन आग्रह गरिएको छ ।”
Prevसरकारले महंगी मध्धेनजर गर्दै फेरी ह्वात्तै बढायो वृद्धभत्ता, कति पुग्यो ? तुरुन्तै हेर्नुस
Nextश्रीमान र छोराछोरी छोडेर भारतीयसँ‌ग भागेकी कञ्चनपुरकी भागरथी राना कसरी ला’श बनेर फर्किइन् !
दो’होरी च्या’म्पीयनको नि’र्णायकमा राजु परियार आउने प’क्का भ’एपछि खु’सि भइन क’ल्पना, सँ’गै सबै दर्शक यसरी भए खुसि…(हेर्नुस पूरा भिडियो)
छिटो हेर्नुस, भर्खरै मन्त्रीमाथी ब’म प्र’हा’र, अवस्था गं’म्भि’र!